Chainsaw - yisibaluli ebalulekile abanikazi izingadi eziningi kanye nezindawo suburban, kanye benzokosilkami futhi trimmers. Le yunithi ikuvumela kungakapheli imizuzu ukuze ujike ehlathini yene e omuhle wobuciko, futhi ukulungisa amamitha ambalwa intilibathwa izinkuni ebusika uma kunesidingo. Nokho, iketango wabona ngokuhamba kwesikhathi hhayi kuphela idinga uphole phezulu uphethiloli, kodwa futhi imimese njalo yochungechunge, okuvame ilahlekelwa impahla yayo. Le nqubo nzima yokuthi amaketanga prongs abe geometry eziyinkimbinkimbi kakhulu. Nokho, ngolwazi amathuluzi adingekayo ungakwazi ukubuyisela izici odlule zedivayisi kuyinto cishe ekhaya. Hhayi-ke, ake sibone ukuthi elola kanjani iketango isaha ngezandla zakho.
Okokuqala, kudingeka alungiselele amathuluzi amaningana ngawo sizokwenza imimese indlela. Ukuze wenze lo msebenzi wathatha indawo ukulahlekelwa sakugcina sikhathi, udinga ukuba amathuluzi ezilandelayo:
Amafayela nge bar-limiter. I ububanzi kule divayisi buncike uhlobo oluthile ngemishini yokusaha. Ngokuvamile, leli nani ingeqi 5.2 kwangu.
Isifanekiso se-imimese amazinyo.
ifayela noma idivayisi esikhethekile elola yokusaha Flat (lokhu kungatholakala kunoma yiliphi esitolo zasengadini).
Vise. Ukuba khona kwabo ozikhethela, kodwa ingasetshenziswa kakhulu ukunciphisa isikhathi sokusebenza, futhi umzamo ichithwa nabo kancane.
Ngakho, indlela is elola yokusaha ngezandla zakho siqu?
Okokuqala sidinga ukuyisusa ikhaba, bese ukunqanda isondo ukubamba futhi zisebenza ukhiphe idivayisi ukuze iphethini umcibisholo kuso kubonisa ohlangothini ukunyakaza yochungechunge. Okulandelayo, udinga eyolanda round ifayela futhi wenze a ukunyakaza ezimbalwa amazinyo ahlabayo. Imizamo isihlobo alole nto kufanele ithunyelwe phambili. I engela okwabonwa uchungechunge imimese kufanele kube ngu-45 degrees. Lapho efeza lezi imisebenzi noma kunjalo engaloli indlela ngesikhathi ukunyakaza ukubuya lefayela, ngoba izenzo ezinjalo ingabe, kunalokho, kuphela udosi lwepeni ngezinyo, bese abasenankosi awukwazi kabusha izakhiwo zalo.
Ukulola iketango isaha ngezandla zakhe wenza ngendlela efanayo ngezinyo ngasinye okwalandela. Phinda lo msebenzi kuze kube isikhathi lapho yonke indlela is hhayi ukusika kahle.
Ngemva izinyathelo ezidingekile ukuze uphendukisa idatha isondo kuyinto eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili degrees futhi uthuthukise yesibili izingxenye nengxenye. Okulandelayo sidinga umphetho amazinyo eqine. Lokhu kwenziwa kusetshenziswa isifanekiso. Kulesi sigaba, ifayela sawing off izinyo kumuntu ukuphakama oyifunayo. Isicelo isifanekiso kuleli cala, ngokukhethekile, kulapho ngakho ngoba kukhona kuphela kits imimese. Nokho, ngemva wonke umsebenzi udinga khumbula ukuthi elola ukuphakama kungaba engalingani. Ngakho qaphela kakhulu. Kuqondane ukuthi ngisho nomunye senzo esingalungile ingasasebenziseki ngokuphelele lonke uchungechunge.
Phela aso phansi, lo mshini is ibuselwe Chainsaw. Konke kulesigaba umbuzo "kanjani is elola yokusaha ngezandla zabo" kungenziwa lwaluthukuthela.
Metal Area - omunye lwezinhlobo ezivame kakhulu amaphrofayli
Fan Axial: Umsizi emsebenzini nasekhaya
Yini ukhonza njengoba Dmg isandiso
Ganina Yama (Ekaterinburg): kanjani lapho. Imigomo kanye nokuvakashela
"Honda Capa": incazelo kanye izici Japanese evulekile evenini